Wararka Maanta: Sabti, Aug 11, 2012-Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose oo laga dareemayo diyargarow loogu jiro Munaasabadda Ciidda
Goobaha laga dareemaya digaargarowga ku aadan ciidda ayaa waxaa kamid ah Suuqa weyn ee dharka lagu iibiyo ee loo yaqaan Balcadka, goobaha dharka lagu tolo ee loo yaqaan (Dawaarleyaasha) iyo weliba meelaha lagu sameeyo cuntooyinka macmacaanka.
Suuqa dharka ee magaalada Kismaayo ayaa lagu arkayaa waalidiin caruurtooda u adeegaya,dhalinyaro iyo dumar ku mashquulsan sidii ay u iibsan lahaayeen dhar qurxoon oo ay ku labistaan maalinta ciidda.
Sidoo kale diyaargarow kan lamid ah ayaa laga dareemaya degmooyinka kale ee gobollada Jubooyinka, sida degmooyinka Afmadow, Jamaame, Jilib, Bu’aale iyo Badhaadhe, waxaana dadka ku dhaqan halkaasi ay ku mashquulsanyihiin sidii ay farxad uga qeybqaadan lahaayeen munaasabadda ciiddul fitriga.
Diyaargarowgan ku aadan munaasabadda ciidda ayaa kusoo beegmaya xilli lagu gudo jiro 10-kii u danbeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana ciidani ay tahay ciid aad uweyn oo ay u dabaaldegaan guud dadka Islaamka ah ee ku nool caalamka.
Inkastoo bulshada ku dhaqan Jubooyinka ay doonayaan in ay si farxad leh ku ciidan ayaa hadana waxaa jirto cabsi ay dadka qaar ka qabaan colaadaha ka aloosan gobollada Jubooyinka ee u dhexeeya ciidamada huwanta ah iyo Al-shabaab.